muva izindonga zomuzi itshe isibe okuhlukile okukodwa yokukhipha okudala Interiors. itshe okuhlobisa sibukeka sisihle, ephelele noma iliphi igumbi, bangafeza yikuphi okuqukethwe yesitayela kuba operation okudingeka bashintshashintshe ngayo futhi nepriveredliv. Izici unique wenze le nto ezingasho nezidumile kwamabhilidi noma izingxenye zayo, futhi exteriors kwezindlu kanye Cottages anoma yiluphi uhlobo.
Ukusebenza ngetshe Kulula, ngakho-ke, zokuhlobisa udonga lwamatshe umhlobiso akudingi imali eshisiwe kuka ukuthengwa izinto ezidingekayo kanye namathuluzi. Futhi lena Ukonga okukhulu. Nina makhosi, qhubekani ubani isikhathi eside wahlanganyela kule ukulungisa, ukwenza umsebenzi ukugqoka amahora ambalwa, kodwa uma zenzele wena, isikhathi kuyoba yini nakakhulu.
Ukuhlobisa izindonga ngetshe zokuhlobisa iqala project okungukuthi ekuqaleni ezidingekayo cabanga kanjani futhi kuphi izokwenziwa. Izinketho zithi amaningi. Ungabeka panel evamile ukuma elingunxande, kamuva uyisebenzisa njengendlela uzimele ukukhethwa isici - umlilo, imidwebo, noma nje laying herringbone lefanele, ungalibalekeli onqenqemeni, kude wesimethri wezangaphakathi, ukudala iphethini eyinkimbinkimbi. Njengomthetho, noma yiliphi ikhambi ezintsha eyaziwa ukuphumelela.
Ukuhlobisa kwezindonga zamatshe yokufakelwa kudinga amathuluzi ethize, njenge:
Ukuqalisa nge ebusweni ukuqondanisa odongeni. Kufanele kube flat ngokuphelele, ngaphandle kwalokho umphumela ezibukwayo jikelele ichithekile. Qondanisa odongeni kuyadingeka, ukusebenzisa usimende. Lena indlela esheshayo futhi ukonga kakhulu. Uma ebusweni ayidingi e ukuqondanisa, itshe odongeni umhlobiso wenza ngokushesha.
Ngokungafani Tile netshe amaqabunga engalingani, okulula kakhulu ukusebenza nabo ngaphandle kwesidingo umgwaqo phambi kobuso futhi esiqinile ngokulungisa emaphethelweni. I ethile kuphela isisindo itshe. Ukukhweza odongeni kwaba esiphezulu, kufanele primed, hhayi ukusindisa on izimpahla.
Nokubopha itshe odongeni by Tile ingcina, kodwa kukhona isixazululo ingxube ayatholakala emakhemisi futhi ekhethekile, zingase wayisebenzisa futhi. Izihlahla Ornamental grinder itshe kungaba disk ku ukhonkolo. Kubalulekile ukusika wire ngesivinini aphansi.
Izindonga zomuzi itshe labetibambile kuhambisana thize. Ngakho, qala laying kufanele kancane kancane asungula ngamunye impahla umugqa okwalandela. Ungakhohlwa mayelana ezivuzayo. Kubo ukuthola flat phakathi tile itshe zingabekwa phansi slats mncane noma plasterboard. Lapho beqeda lezi zinto ziyasuswa, futhi ezinkulu uphawu ngodaka.
Ukusebenza itshe, ungakhohlwa mayelana sobuhle bayo, kufanele athwale. Ngakho-ke, kumele umsebenzi owawenziwa ngokucophelela, abagcina ezivuzayo equidimensional, akukho igawula, breaking ubuqotho ebusweni. Kubaluleke ngokufanayo ukukhetha ilungelo umbala umthunzi, okuzokwenza ngempumelelo ukuhlukanisa ehlotshisiwe isici elingaphakathi, kodwa hhayi ukwenza kube blob ongaqondakali ukuthi akanayo incazelo.
itshe okuhlobisa kahle Umncele nanoma iyiphi enye izinto kokuphothula. Ubizwa wayisebenzisa i umhlobiso exteriors, udala mbumbulu amahle, esiwusizo futhi esimeme.
PVC amathayili phansi: ukubuyekezwa. Modular, self-Yesigcilikisha PVC tile: Intengo
Cork flooring: izinhlobo, izici, izindlela isethulo
"Uthulile": abadlali, izici zesakhiwo
Igama lakhe Ariadna igama, incazelo yalo
"NoCherie Tigo" (AWD): kuzibuyekezo, izintengo
Altai esifundeni, sanatoriums: incazelo, amasevisi, amanani, ukubuyekezwa
Ukubuyekeza: Huawei Dumisani 4x. Sibutsetelo izici. Ukukhetha i-smartphone